पदाधिकारी सिफारिस गर्न छलफल , कति रिक्त छन् पदाधिकारी ?
मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजपदाधिकारी सिफारिस गर्न छलफल , कति रिक्त छन् पदाधिकारी ?
बुधबार, ०१ पुस, २०७७ 0प्रतिक्रिया
विराटनगर । संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारी पदपूर्तिका विषयमा लामो समयपछि औपचारिक रूपमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
प्रायः आयोगहरूमा पदाधिकारी रिक्त भए पनि लामो समयदेखि छलफल हुन सकेको थिएन । परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रियामा छलफल हुन सकेको थिएन । मङ्गलबार बिहान बसेको पहिलो बैठकमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएपछि बैठक गणपूरक सङ्ख्या अभावमा औपचारिक रूपमा कार्यसूचीमा प्रवेश भएको थिएन । गत शुक्रबार पनि सभामुख सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुने भएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
गणपूरक सङ्ख्या अभाव भएपछि सरकारले मङ्गलबार नै अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी र निर्णय प्रक्रियाको कार्यविधि परिमार्जनका लागि अध्यादेश सिफारिस भएको थियो । अध्यादेश मङ्गलबार नै जारी भई साँझ दोस्रो बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले औपचारिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिको छलफल प्रारम्भ गरे पनि निर्णय गरेन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको दोस्रो बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मात्र उपस्थित थिए ।
नयाँ संविधान जारीपछि थप भएका संवैधानिक निकायमध्ये कतिपयले पहिलोपटक समेत पूर्णता पाएका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पछिल्लो समय अध्यक्षसहित चारै सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि संवैधानिक निकायमा कुल ४५ पद रिक्त भएको छ । गत असोजमा आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितका पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
छलफल पदाधिकारी सिफारिस